के हो एन्टिबडी टेस्ट ? - Jhilko
के हो एन्टिबडी टेस्ट ?
काठमाडौं । जब हाम्रो शरीरलाई कुनै भाइरस वा ब्याक्टिरियाले आक्रमण गर्छ त्यस भाइरससँग वा ब्याक्टिरियासँग लड्न हाम्रो शरीरले Antibody निर्माण गर्छ । हाम्रो शरीरलाई सामान्य फ्लु रुघा, खोकी, लाग्दा पनि हाम्रो शरीरमा Antibody निर्माण हुँदै भाइरस र ब्याक्टरियाहरुसँग लड्न थाल्छ ।
त्यस्तै कोभिड –१९ संक्रमित व्यक्तिको शरीरले संक्रमण भएको केही दिनपछि कोरोना भाइरससँग लड्न एन्टिबडी निर्माण गर्न थाल्दछ । शरीरमा एन्टिबडी छ/छैन पत्ता लगाउन RDT अर्थात -यापिड डाइग्नोस्टिक टेष्ट गरिन्छ । RDT मा पोजेटिम देखिनु भनेको त्यो व्यक्तिको शरीरमा एन्टिबडी छ भन्ने बुझिन्छ ।
त्यसैले RDT मा पोजेटिम देखिनु भनेको त्यो व्यक्तिलाई केही समय पहिले कोरोना भाइरस थियो भन्ने मानिन्छ । समुदायमा कोरोना भाइरस कतिसम्म फैलिसकेको छ भनेर टेष्ट गर्ने माध्यम RDT हो ।
एन्टिबडी शरीरमा कति समयसम्म बस्छ जसले फेरि भाइरस संक्रमण हुन दिंदैन भन्ने विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ । मानौं, कुनै एक व्यक्तिलाई सामान्य रुघा लाग्यो, तब उसको शरीरले फ्लुसँग लड्न एन्टिबडी निर्माण गर्छ र उक्त व्यक्तिलाई केही समय फेरि रुघा नलाग्न Immune पक्कै दिन्छ । तर उसलाई कहिले रुघा नलाग्ने भन्ने होइन ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसमा पनि एन्टिबडी रहुनन्जेल Immunity त मिल्छ तर एन्टिबडी लेभल घट्दै गएपछि फेरि संक्रमण हुने जोखिम पक्कै हुन्छ ।
आरडिटी भरपर्दाे नभएको भनेर कतिपयले यसलाई बन्द गर्न सुझाइरहेका छन् तर सस्तो, छिटो र धेरैलाई टेष्ट गर्ने यो माध्यमको दायरालाई अझ बढाउँदै लग्न सकियो भने समुदायमा कति फैलिएको छ भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारको क्षमतालाई पनि ध्यान दिंदा यो माध्यमलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ ।
रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गर्ने कि ?
गौरीफन्टा नाकाबाट १हजार ४ सय नेपाली स्वदेश भित्रदै
हामी चीनसँग खुशी छैनौं, कोरोनालाई चीनमै रोक्न सकिन्थ्यो...
ट्रम्पले भने, 'तुरुन्तै रोक्न सक्ने अवस्था थियो, चीनले यसो गरेको भए यो पुरै विश्वमा...
'पार्टी विभाजन गर्न सजिलो पार्न ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ रे हो...
प्रधानमन्त्री ओली र कुवेतका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन सम्वाद
उनले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको सुरक्षा र कल्याणको बारेमा कुवेती प्रधानमन्त्रीसँग...